Mayelana neMicen - MICEN CO., LTD
IMicen ingumkhiqizi okhulayo nomhlinzeki wezixazululo ezahlukahlukene nezisebenzisekayo zokupakisha zemikhiqizo nezinkampani zobuhle. Kusukela kumkhiqizi webhodlela lengilazi ngo-2006, linamahhovisi nezindawo zokukhiqiza eChina nase-Australia. IMicen ikhula kancane kancane futhi yenza imizamo yezinhloso ezibekiwe.
Ibhizinisi likaMicen lisuselwe emisebenzini emine esemqoka: ukuklama, ukuthuthukisa, ukuthola nokwenza izixazululo zokupakisha zemikhiqizo yezokwelapha nobuhle.
Ifektri eyakha idolobha laseWuxi elinendawo engaphezulu kokukhiqiza eyi-10000 square metres. Hlanganisa imikhiqizo yenziwa ngengilazi, ipulasitiki ne-Aluminium.
IMicen ayinikezi nje kuphela ama-packagings ajwayelekile kepha futhi ihlinzeka nge-packagings eyenziwe ngezifiso kawoyela obalulekile, iphunga, ukunakekelwa kwesikhumba nokwenziwa. Ulayini wokukhiqiza uhlanganisa ukwenziwa kwengilazi, i-plastic-injection, i-alu-punching, i-anodizing, inhlangano, ukuphrinta kwesikrini sikasilika nokushaya isitampu okushisayo. Zuza ohlelweni lwe-ERP, iMicen ihlala izama ukwakha iworkshop "esobala" kumakhasimende ethu futhi iqinisekisa izikhathi zokuhola ezisheshayo.
I-Micen igxile ekukhiqizeni umthamo omncane wezimonyo. Ngeminyaka engaphezu kweyishumi yokuthuthukisa nokukhiqiza isipiliyoni sokupakisha kwezimonyo, iMicen ithumela ngaphandle emhlabeni wonke kumikhiqizo eminingi yezimonyo ehamba phambili njenge-AVON, L'oreal, Dior nabanye.
Idizayini yenkampani yakwaMicen iFanso design eShanghai iyinsizakalo enkulu yokwakhiwa komkhiqizo nentuthuko. IMicen neFanso basebenza ndawonye ukuhlinzeka ngemvelo emnandi, ama-packagings amnandi kanye nensizakalo enhle kumakhasimende ethu.
Inkampani (ifektri) isibonisi
Into idlulile ngesitifiketi sikazwelonke esifanelekile futhi semukelwe kahle embonini yethu eyinhloko. Ithimba lethu lobuchwepheshe lobunjiniyela lizohlala likulungele ukukusebenzela ukubonisana nempendulo.